Stremio - ခေတ်သစ်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာကို Popcorn အချိန်အစားထိုးရန် Linux မှ
အက်ပလီကေးရှင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူဆက်လက်, နှစ် ဦး စလုံးအတွက် မာလ်တီမီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်, အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့သောသူတို့အား အခမဲ့ကုဒ်, ငါတို့မှာရှိတယ် တကယ.
သော်လည်း တကယ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ခေတ်မီ။ အလုပ်လုပ်ရန်မည်သို့ပြောင်းလဲလာသည်ကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာပါသည် မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ (မီဒီယာစင်တာ)အဘို့အပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ပေးသော အွန်လိုင်းမာလ်တီမီဒီယာဖျော်ဖြေရေး, ကိရိယာများကိုအသုံးပြု ပလပ်ဂင်များ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ယခုမှစ အခမဲ့ကုဒ်.
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် Popcorn အချိန် streaming appကစတင်ခဲ့သည်အဖြစ် အသစ် beta ကိုဗားရှင်း, 4.0၎င်း၏အံ့သြဖွယ်၏ open source app။ ၎င်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာသော်သတင်းများမရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းပြီးနောက်၊ စာတန်းထိုးတွေကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်ငါမသုံးတော့ဘူး။
သော်လည်း, တကယ ဒါဟာအများကြီးနဲ့တူ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အချိန် ၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွက်, အမှန်တကယ်ကလက်ရှိပိုပြီးတူ၏ Kodi ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလက်တွေ့ကျသောအသုံးချမှုကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပွင့်လင်းသော Multimedia Center ဖြစ်သည် ပလပ်ဂင်များ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပိုပြီးတူသောစေသည်အကြောင်းပြချက် ကြံ့ခိုင် Multimedia စင်တာ ဘာလဲ ရိုးရှင်းသောမာလ်တီမီဒီယာအက်ပ် streaming မှတဆင့်။
1 Stremio: အခု Alpha Open Version အသစ်
1.1 Stremio ဆိုတာဘာလဲ
1.2 ယေဘုယျ features တွေ
1.3 Open Source သို့ပြောင်းပါ
Stremio: အခု Alpha Open Version အသစ်
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဤလျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသည် -
"Stremio သည်ဗီဒီယိုဖျော်ဖြေရေးအတွက်အဓိကကျသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသောခေတ်မီမီဒီယာစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သောပလပ်ဂင်များမှတဆင့်ဗွီဒီယိုများကိုရှာဖွေ၊ ကြည့်ရှုစီမံခြင်း ရုပ်ရှင်များ၊ တီဗီရှိုးများ၊ တိုက်ရိုက်တီဗွီသို့မဟုတ်ဝဘ်လိုင်းများ၊ အရာအားလုံးကို Stremio လက်လှမ်းမီနိုင်သည်".
ယေဘုယျ features တွေ
အကြောင်းအရာအသစ်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးအစားများ၊ သတင်းများ၊ အခြားသူများအကြားအလွယ်တကူသွားလာနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးဘားပေါ်ရှိစာသားပုံစံကိုက်ညီမှုများကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာဗဟိုမှလွယ်ကူချောမွေ့ရုပ်ရှင်၊ စီးရီး၊ anime နဲ့တခြားဗွီဒီယိုအမျိုးအစားများကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားခြင်း။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသစ်သောဖြစ်စဉ်များနှင့်ဖြန့်ချိမှုများအကြောင်းကြားစာများလက်ခံရရှိမှုကိုစီမံသည်။ အသုံးပြုသူကြည့်ရှုသည့်အလေ့အထနှင့်အညီအကြံပြုချက်များ။
အနှစ်သက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြေ - အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်တယ်။ နှင့်ပါဝင်၏သို့မဟုတ် display ကို၏နေ့စွဲ, ဒါမှမဟုတ်အက္ခရာအမိန့်အားဖြင့်အမိန့်ပေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်သင့်အားမီဒီယာအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများမှ ၀ င်ရောက်လာသောအကြောင်းအရာကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်ဖြေ - အမျိုးမျိုးသော Devices and Operating Systems မှာအမျိုးမျိုးသော platform အတွက်ပါ။
Open Source သို့ပြောင်းပါ
၎င်း၏ developer များအဆိုအရခေတ်သစ် တကယ ၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည့် open source format အောက်တွင်၎င်း၏ alpha version ကိုလွှတ်ပေးပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာကြည့်ရှုနိုင်သည် GitHub။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထားသော user interface ကိုပြသပြီး၊ အရောင်အရောင်သစ်တစ်ခုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လုံးဝတီထွင်ထားသော full-featured user interface ကိုပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် open source ဖြစ်ပြီးအဘို့, ကအောက်မှာလိုင်စင်ရသည် GPLv2.
ဒီဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်သည်အောက်ပါကိုရယူနိုင်သည် တရားဝင် link ကို.
တကယ Tien GNU / Linux အတွက် Installers အောက်ပါပုံစံများဖြင့်:
deb: DEBIAN / Ubuntu ဖြန့်ချီမှုများနှင့်အလားတူ (stremio_4.4.106-1_amd64.deb)
.rpm: Fedora ဖြန့်ချိမှုနှင့်အလားတူ (stremio-4.4.106-1.fc31.x86_64.rpm)
အဲဒီမှာရှိပါတယ် Arch / Manjaro Repositories (AUR) နှင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်သို့ချုံ့ GitHub မဆို Distro အပေါ်ပြုစုခံရဖို့။ ထို့အပြင်အတွက် installers ကို Windows, MacOS, Android နှင့် iOS.
တိုတိုပြောရရင်ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်း တကယ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ အစားထိုး ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်အချိန် y Kodi။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါယခုအချိန်အထိကျေနပ်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူအသုံးပြုနေပါတယ်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Stremio»တစ် ဦး သည်ခေတ်သစ်နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ (မီဒီယာစင်တာ)အဘို့အပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ပေးသော အွန်လိုင်းမာလ်တီမီဒီယာဖျော်ဖြေရေး, ကိရိယာများကိုအသုံးပြု ပလပ်ဂင်များ ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူပြီးယခုတွင်ရွှေ့ပြောင်းပြီးပါပြီ «Código Abierto»; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Stremio - ခေတ်သစ်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ Popcorn အချိန်အစားထိုးအဖြစ်
Juan Cisneros ဟုသူကပြောသည်
ငါ Kodi ကိုသုံးပြီးအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့ဒါကိုငါပြန်သုံးသပ်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Juan Cisneros ကိုပြန်ပြောပါ
Juan! မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းအနေနဲ့လျှောက်လွှာကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းငါနောက်ကျနိုင်တယ် သို့သော်လည်းငါသည် Jellyfin စဉ်းစားရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်
64br137 ကို Reply
ဂါဗြေလ! သင်၏မှတ်ချက်နှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါမကြာခင် Jellyfin အကြောင်းပြောဆိုရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။